Ulungiselela ukuba ngumama ozayo. Eli lixesha elihle xa unako, uhambe ngekhefu lokubeleka uze ulele embhedeni, zibuze umbuzo: unokwenza ntoni ngexesha lakho lokukhulula? Phantse bonke abafazi bajonge phambili kwithuba apho kuza kuba nexesha elininzi lokukhululeka. Kodwa oomama ngokuza kubakho bajamelana neengxaki ezinjalo abengazi ukuba benzani ngexesha labo lokukhulula ngexesha lokukhulelwa, kwaye baninzi nangona bangakulungele ukufika kwexesha elizayo.
Ixesha elikhululekileyo kumfazi okhulelwe uphendukela ekungabikho kokungavumelekanga, okwenzeka emva kweveki ezimbalwa kubangele isimo esibi.
Uninzi lwezengqondo zivumelana nempendulo enye kumbuzo: ndingenzenjani ngexesha lam elithile elikhulelweyo labasetyhini abakhulelweyo. Kwaye bathi ukukhulelwa kunye nexesha elikhululekile kunceda umfazi ukuba abonakalise amandla akhe okudala. Ndiza kunika ezinye izinto ezisisiseko ozenzayo xa ukhulelwe.
Abafazi bathanda ukuthenga, kunye nexesha lokukhulula ngexesha lokubeleka livula amathuba amakhulu ngamnye kuthi. Ukuziva indlela umzimba wethu utshintsha ngayo kwaye uzuze iifomu ezintsha ngexesha lokukhulelwa, siqala ukujonga iintlobo ezahlukahlukeneyo ezenziwa ngabayili bezakhiwo. Izambatho zabafazi abakhulelweyo ngoku zivumela ukuba ubukeke buhle kwaye zikhangele kubantu abakuzungezile kwaye, ngokubaluleke kakhulu, mhlawumbi kubantu bakho abathandekayo.
Yintoni enye ongayenza ngexesha lakho lokukhulula kumfazi okhulelwe? Ngokuqinisekileyo, unokuhamba kwakhona ngeentengiso, njengoko le nto ayaneleyo nawuphi na kuthi. Ungathenga i-diapers kunye neengubo zexesha elizayo ngaphambi kokuzalwa, okuza kunciphisa iindleko ezilandelayo zokunyamekela umntwana. Ndicinga ukuba uya kuvuya ukuqonda ukuba ezo zinto ezithengayo ngexesha lokukhulelwa ziya kugqunywa ngumntwana wakho ozayo.
Kwakhona, ngexesha lakho lokukhulula unokwenza ilungiselelo legumbi lomntwana. Ungakwazi ukuza lula kunye nokuphumeza iingcamango zakho, indlela yokuhlobisa igumbi lomntwana wakho.
Ukwenza umzobo ngexesha lakho lokuzimela kumfazi okhulelweyo kuya kuba luncedo. Ngokuncedwa kwepeyinti ungayiva kwiitalente ezintsha kwaye ujoyine ubugcisa. Ukwenza oku, uza kuthenga kuphela i-albhamu nemibala. Ungasebenzisa iphepha lodonga lomntwana njengengxowa, ekufuneka usitshintshile kwiminyaka embalwa, xa umntwana eqala ukuwapenda aze athabathe iipenki zakhe ezidlala.
Ukuzibandakanya ngexesha lokukhulula kumfazi okhulelwe kunokwenzeka kwakhona ukuqina okanye umzimba wokuzivocavoca. Kuya kukunceda uchithe ixesha lakho lokukhulula kwaye uqinise umzimba wakho ngaphambi kokubeletha. Kukho iindlela ezikhethekileyo ezinciphisa umthwalo emthonjeni wesifazane okhulelweyo, ukuze xa wenza i-gymnastics, uya kuziva ukhululekile emva.
Enye indlela enhle, yintoni enokwenziwa kwabasetyhini abakhulelweyo ngexesha labo elingaphandle kwimizi yasekhaya kunye nokulungiselela ukubeletha ufunda iincwadi ngokukhulelwa. Nangona ungafunda yonke into: kumaphephancwadi abathandayo abafazi, ekupheleni kwemisebenzi emikhulu yeKarl Marx. Ngokomzekelo, ndifunda lonke ixesha lika-Dostoevsky elikhululekile ngexesha lokukhulelwa. Funda kwaye uzifundele izinto ezintsha.
Ewe, oku akusiyo yonke uluhlu lwezinto onokuzenza ngexesha lakho lokukhulula kumfazi okhulelweyo ukuze ukhanyise ixesha lakho lokuphumla. Khumbula into ephambili - ukukhulelwa akusisifo! Ngako oko, ungazithobeli ubomi obuzeleyo kunye nobutyebi. Sebenzisa ixesha lakho lokukhulula ukuya phezulu. Ngaphandle kokwesaba, uye kwimibhiyozo, kuma-movie kunye nokuthengwa kwiivenkile. Phila ubomi obuqaqambileyo kwaye ulungiselele ukubonakala komntu omncinci, ke ndikuqinisekisa, awuyi kuba nexesha kunye nombuzo onobuwula, ukuba wenze ntoni kwixesha lakho lamahhala kumfazi okhulelwe!
Ndikunqwenela ulonwabo kunye nokuhambisa lula!
Yintoni endiyidlayo ngexesha lokukhulelwa?
Yintoni eyingozi kunye nento enhle kwabafazi abakhulelweyo
I-Gymnastics yabasetyhini abakhulelweyo kwiinyanga ezintathu zokuqala
Iibhontshisi zilungile kwimpilo yomzimba
Amaqanda othosiweyo ngesi-Arabhu
Indoda-isithandwa, esilungileyo okanye esibi?
Isidlo siyisidlo esibalulekileyo
IHoroscope yeentlanzi ngonyaka we-tiger
Amakhowe athatywayo iKrismesi
Iinanapple kunye nomango we-smoothies
I-Snack "Sea Shell"
Ukubuyiselwa kombala weenwele
Ukuphuhlisa umdla kunye nothando lwencwadi phakathi kwabafundi besikolo
Ukwabelana ngesondo kunye nokukhulelwa kuyahambisana